राज्यसँग न्यूनतम नैतिकतासमेत नभएकाले अनशन तोड्न डा. केसीलाई नागरिक अगुवाको आग्रह – Health Post Nepal
२०७५ माघ १८ गते १६:४५
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेललगायत नागरिक अगुवाहरूले २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई जारी अनशनको कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गरी सत्याग्रहको महान् अभियानलाई फरक ढंगबाट अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । राज्यले पूर्णतः संवेदनाहीन भई न्यूनतम नैतिकता र इमानदारीसमेत गुमाइसकेकाले यस्तो अवस्थामा सत्याग्रह प्रभावहीन हुने भन्दै उनीहरूले अनशन तोडेर जीवनरक्षा गर्न डा. केसीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
नागरिक अगुवाहरूले सरकार आफैँले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो नागरिकसमाजलगायत आमजनताको समर्थन रहेको डा. केसीको सत्याग्रहलाई बलपूर्वक प्रतिकार गर्ने, हिंसा फैलाउने र छद्मभेषी अनशनकारी खडा गर्नेजस्ता अनैतिक कार्यमा लागेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले चलाएको अभियानको उच्च मूल्यांकनसमेत गरेका छन् । सत्य र निष्ठाका साथ डा. केसीले सुरु गरेको अभियान र सोमार्फत हासिल भएका उपलब्धिको नेपाली समाज र नागरिकले समेत उच्च मूल्यांकन गरेको नागरिक अगुवाको विश्वास छ । उनीहरू डा. केसीले अघि बढाउने अभियानका हरेक स्वरूपमा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहनेसमेत विश्वास दिलाएका छन् ।